अल्जाइमर के हो, कसरी जोगिने ?
स्मृति क्षय हुने रोगलाई अल्जाइमर भनिन्छ । अल्जाइमर रोगले व्यक्तिको व्यवहार तथा व्यक्तित्वमा परिवर्तन गर्ने, बिर्सने, अरुलाई विश्वास गर्न नसक्ने, शङ्का गर्ने, हिँडडुल गर्न नसक्ने बनाउँछ ।
यो रोग मस्तिष्कका विकृतिहरू समूहगत रोग हो । जसले सोच, स्मृति, निर्णय क्षमता तथा व्यक्तित्वलाई दुष्प्रभावित गर्छ । यो रोग बिस्तारै बढ्दै जाने भएकाले पहिले यसको निदान हुँदैन । र सुरुको अवस्थामा अधिकांश बिरामीले उपचारको आवश्यकता महसुस गर्दैनन् ।
मानिसको आयु वृद्धिसँगै यो रोग धेरै व्यापक हुँदै गएको छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वका १ प्रतिशत भन्दा वढी मानिसलाई यो रोगले गाँज्ने अनुमान गरिएको छ ।
तनाव र विभिन्न समस्याका कारण महिलाहरूमा अल्जाइमर रोगको जोखिम बबढेको छ । अन्तराष्ट्रिय पत्रिका ‘गैरियाटिक साइके्रटिमा’ प्रकाशित एक रिर्पोटअनुसार तनावबाट जन्मिने हार्मोन महिला र पुरुषमा अलगअलग किसिमले उत्पन्न हुने गर्दछ । पुरुषको तुलनामा महिलामा अल्जाइमर रोग अत्यधिक रुपमा बढ्ने गर्छ ।
अल्जाइमर रोग विश्वभर फैलिएको छ । विश्वका झण्डै ४ करोड ७० लाख मानिस अहिले डिमेन्सिया अर्थात् भुल्ने कारण हुने पागलपनबाट प्रभावित छन् । यो रोगले प्रत्येक ६८ सेकेन्डमा आफ्नो प्रभाव देखाउने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अल्जाइमर्स एशोसियसनका अनुसार ६० वर्षभन्दा वढी उमेरका महिलाहरू अल्जाइमर पीडित हुन्छन् । वर्तमान अवस्थामा यो रोगको उपचार र अल्जाइमर गम्भीर हुनबाट रोक्ने ओषधि बनेको छैन ।
अमेरिकाका जोन होकिन्स युनिर्भसिटीका प्रोफेसर सिसन्थया मुनरोका अनुसार हामी मानिस समस्या र तनावबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ । तर तनावबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने समाधान पक्कै आफैसँग हुन्छ ।
अल्जाइमर सम्बन्धी जान्नुपर्ने केही जरुरी तथ्यहरू यस्ता छन् ।
– सामान्यतया ६५ वर्षको उमेरपछि यो रोग लाग्छ । र ६५ वर्षपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा यसको प्रभाव दुई गुणा बढ्दै जान्छ ।
– वढी संवेदनशील स्वभाव र आयु लामो हुने भएकाले महिलामा वढी यो रोग लाग्छ ।
– वंशाणुगत र टाउकोमा वढी चोटपटक लागेको व्यक्तिमा ।
– उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्ट्रोल, डिप्रेसन र मानसिक बिरामी, डाउन सिन्ड्रोम, सुस्त मनस्थिति र अधिक मोटोपना भएकालाई लाग्छ ।
१. सुरुको अवस्था
– तत्कालीन घटना एवम् कुराकानी बिर्सनु ।
– हिँडाइ असामान्य देखिनु ।
– डिप्रेसन र सामान हराउनु ।
– एकाग्रतामा कमी हुनु ।
२. मध्यम अवस्था
– आफ्नो पहिचान बिर्सनु ।
– मतिभ्रष्ट, वादविवाद, कुटपिट र हिंस्रक हुनु ।
– राम्रो, नराम्रो र खतरापूर्ण वस्तु पहिचान गर्न नसक्नु ।
– समाजबाट एक्लिनु ।
३. गम्भीर अवस्था
– सम्वेदना हराउने र वजन घट्ने ।
– आफन्त, साथी र परिवाका सदस्यहरु नचिन्ने ।
– खानेकुरा चपाउन र निल्न नसक्ने ।
– चेतना हराउने ।
अल्जाइमरको पुरा उपचार भने छैन । यो रोग सम्बन्धी जति पनि औषधी उपचारहरुको व्यवस्था भएको छ त्यसले अल्जाइमरको एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा बल्झिन नदिने मात्र हो । अल्जाइमर भइसकेका बिरामीमा यसले जति क्षति गरेको छ त्यो पुर्णरुपमा ठिक हुने औषधि उपचार आजसम्म बनेको छैन ।
ती सबै औषधि उपचारहरु अनुसन्धानको क्रममा छन् । तर अल्जाइमर सुरुवाती चरणमा छ भने मल्टि भिटामिन, एन्टि अक्सिडेन्ट, माछाको तेलको मद्धतबाट दिमागको कोशिकाहरुलाई सन्तुलनमा राखी उपचार विधि सुरु गरी रोग बल्झिनबाट रोक्न सकिन्छ । बाँकी उपचार विधि भनेको ध्यान, दिमागको थेरापी, र अन्य औषधि उपचार रहेको डा. रविन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
अल्जाइमरको औषधि पहिले भारतबाट ल्याउने गरिन्थ्यो । अहिले विभिन्न अल्जाइमर सम्बन्धी संस्थाले गर्दा सहज रुपमा नेपालका पनि बजारमा उपलब्ध छन् । खासै यो रोग निर्मुल गर्न भने सकिँदैन, यसको रोकथाम गर्दा भविष्यमा यसबाट हुने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । यसको लागि बजारमा अल्जाइमर सम्बन्धी औषधी उपचार उपलब्ध छ ।
अल्जाइमरको सही समयमा उपचार गर्न सकियो भने जुन तरिकाले यो रोग बल्झिदै जान्छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ । यो रोगले बिरामी सँगै उसका आफन्तलाई पनि उत्तिकै दुःख दिन्छ ।
व्यक्तिमा अल्जाइमर देखापर्ने बित्तिकै उपचार गरिएन भने तीनदेखि चार वर्षसम्म बिरामीको मृत्यु हुने गर्छ । अल्जाइमर्समा मृत्युको मुख्य कारण खाना सड्किनु हो । खाना फोक्सोमा जानुलाई निमोनाइटिज भनिन्छ जुन मृत्युको मुख्य कारण हो ।